काखी गनाउने समस्या छ ? यस्तो छ सजिलो घरेलु उपचार - ज्ञानविज्ञान
काखी गनाउने समस्या एउटा आम समस्या हो । बिशेष गर्मी याममा यो समस्याले पीडित बनाउने गर्दछ भने, साथी भाई नजिक उपस्थित हुँदा लज्जा बोध पनि हुन्छ ।
पसिना आफैंंमा गन्हाउने नभए पनि छालामा भएको ब्याक्टेरियाले नराम्रो गन्ध उत्पन्न गर्छ । दुर्गन्धबाट बच्न शरीरको सफाइ आवश्यक छ । पसिनासँगै शरीरबाट अनावश्यक अमोनिया, प्रोटिन, त्रोसो, अम्ल र नुनसमेत बाहिर आउने गर्छ जसले विशेष प्रकारको दुर्गन्ध उत्पन्न हुन्छ ।
काखी गनाउने समस्या को समाधान के त ?
दैनिक यथारुपले नित्य नुहाउने गरौं । नुहाइ सकेपछी राम्रो सँग टावलले शरीर पुछौ । ठीक्क हातमा लिने मिल्ने फिट्किरीको टुक्रा आफ्नो काखीमा हल्का केही बेर करीब आधा सेकेन्ड दुबै काखीमा दलौ । बस यही हो समाधान । हरेक दिन यही प्रकृया दोहोर्याउ ।
के तपाइको काखी मुनी कालो दाग छ ?छ भने यस्तो छ समाधानको उपाय
आधुनिक जीवनशैली संगै आजकाल सुन्दरतामा पनि विशेष ध्यान दिन थालिएको छ। सुन्दरतामा निखार ल्याउनको लागि हात खुट्टा साथै काखीमुनीका रौँहरु निकाल्ने गरिन्छ।
काखी मुनिको रौँ निकाल्दा, रौँ निक्लिएपनि त्यहाँ कालो दाग रहिरहन्छ। जसले गर्दा, खुल्ला लुगा लगाउँदा काखीले सुन्दरतालाई बिगारिदिन्छ। यसको लागि दन्तमन्जन सहयोगी बन्न सक्छ । दन्तमन्जनमा थोरै कागती मिसाएर काखीमा लगाउने र त्यसलाई केही छिन कागतीले नै दल्ने गर्नाले काखीको कालो हट्दै जान्छ।
Don't Miss it पिनास भनेको के हो ? लक्षण र सावधानी र उपचार
Up Next के तपाईलाई धेरै पसिना आउँछ ? यस्ता छन् रोकथामका उपाय